शिवमायामा शिवशक्ति भर्ने को हो ? Globe Nepal News Portal
सत्तारुढ दल नेकपाले अझै सभामुख चयन गर्न सकेको छैन । कृष्णवहादुर महरा सभामुखबाट च्युत भएसंगै रिक्त रहेको सभामुख यस पदमा कसलाइ राख्ने भन्ने विषयमा यति धेरै वहश र विवाद भएको छ कि यस्तो होला भनेर न केपी ओलीले सोचेका थिए न सभामुख हुन तयार भएर बसेका सुवास नेम्वाङलाइ नै ।
महरा जेल परेपछि सभामुखको रुपमा सर्वाधिक चर्चा भएका पात्र हुन–सुवास नेम्वाङ । २०६३साल देखि २०७२सालसम्म अनवरत रुपमा सर्वसम्मतिबाट सभामुख पद खाने उनै हुन । जब महरा जेल परे यसपछि अचानक उनको नाम सभामुखको रुपमा आयो । तर,उनको यो नामलाइ छायामा पार्ने गरि अर्को नाम आयो हालकी उपसभामुख शिवमाया तुम्हाम्फेको । सुरु सुरुमा शिवमायाले उपसभामुखबाट राजीनामा दिने र उनलाइ मन्त्री बनाइने र उक्त स्थानमा सुवासलाई राख्ने चर्चा चल्यो तर नेकपा भित्रकै पुर्वमाओवादी खेमाले हरेक कुरा हामीले मात्र छाडनुपर्ने हो र ? भनेर प्रश्न खडा गरेपछि सभामुख चयनमा पुर्वमाओवादी खेमाको तर्फबाट नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसवारेमा अडान लिएका छन । उनले पुरानो सहमति अनुसार,प्रधानमन्त्री पुर्वएमालेले लिए भने सभामुख पुर्वमाओवादीले लिएको दावी गरेका छन । यहि दावीको आधारमा पटक पटक अध्यक्ष दाहालको अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसंग सम्वाद भएको छ तर निकास भने आएको छैन ।
सभामुख चयनमा परेको गाठो यति मात्र होइन,यसमा नजानिदो ढंगबाट तर मजवुद प्रकारको अडान राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीको रहेको छ । तर उनको समर्थन भने दुवै अध्यक्षको भन्दा फरक खालको छ । उनले हालकी उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाइ नै सभामुख बनाउनुपर्ने अडान लिएकी छिन । यसरी त्रिपक्षीय अडानको भुमरीमा फसेको सभामुख चयन प्रक्रियाको गाठो अझै फुकेको छैन । र,सभामुख छान्न समय लाग्ने देखिएकै बेलामा शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाइ शिवमायाले भेटेर पुष २७ गते देखि संसद चलाउने भनेकि छिन ।
भेटमा दुइ अध्यक्षले उपसभामुखलाइ राजीनामा दिन भने तर उनले मानिन । कुनै समय राजदुतमा सिफारिश भएकी शिवमाया शुक्रवार यति वोल्ड भइन कि उनले दुइ अध्यक्षलाइ नै चुनौती दिदै आफु पछि नहटने बताइन । आखिर,कमजोर ठानिएकी शिवमायामा शिवशक्ति कसरी प्राप्त भयो ? यो उर्जाको स्रोत के हो ?
सवैले वुझेको सत्य के हो भने उनलाइ राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीको गतिलो आड र भरोशा रहेको छ । यो बलका सामु दुइ अध्यक्ष समेत निरीह भएका छन ।
नेकपा र अन्र्तराष्ट्रिय परिस्थितिलाइ राम्रोसंग वुझेकाहरु सभामुख प्रकरणलाइ एमसिसीसंग जोडेर पनि हेरिरहेका छन । तत्कालिन सभामुख कृष्णवहादुर महरा जेल परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसि सदनमा नलगेको र पास नगरेको भनेर उनी प्रति आक्रोश पोख्दै अब संसदबाट पास हुने वताएका थिए । नेकपामा यतिवेला सभामुख चयनको लागि रस्साकस्सी चलिरहदा एमसिसि माथिको बहश र विश्लेषण झन कडा भइरहेको छ । यसैकारण कतिपय वुद्धिजीविहरु सभामुख चयन संग एमसिसि जोडिएको बताउन थालेका छन । नेकपा भित्र केपी ओली समुहका कतिपय नेताहरु एमसिसि पास हुने र यसलाइ पास गर्न अनुकुल हुने खालको सभामुख खोजि भइरहेको बताइरहेका छन । यहि तर्क दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखमा सुवासको नाम पटक पटक उच्चारण गरिसकेका छन तर नेकपा भित्रकै अन्य खेमाहरु भने एमसिसिको नै विरोधमा उत्रिएका छन । पुर्वमाओवादी,माधव नेपाल र वामदेव गौतम समुहहरु एमसिसिको विपक्षमा देखिएका छन । र,राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरि संविधान संशोधन गर्ने र वामदेव गौतमलाइ राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारीमा ओली पक्षइतरका नेताहरु सहमत भएका छन । यसरी नेकपा भित्रको विवाद जेलिन पुगेको छ । र,प्रधानमन्त्री ओलीइतरको समुह विस्तारै एकजुट हुन थालेको छ ।
पछिल्लो जानकारी अनुसार,अध्यक्ष दाहाल समुह कसैगरि पनि सभामुखमा आफनो दावी नछाडने मुडमा पुगेका छन । यहि कारण पनि नेकपा भित्रको सभामुख कसलाइ बनाउने भन्ने बहशले लामो समय लिने देखिन्छ । र,यो भन्दा पेचिलो बहश चाहिं एमसिसिमा देखिन थालेको छ । नेकपा भित्र नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको देश भएकोले एशिया प्यासेफिक रणनीतिको साझेदार हुने गरि एमसिसि पास गर्न नहुने नेकपा भित्रकै प्रचण्ड समुहको भनाइ छ भने ओली समुह जसरी पनि पास गर्ने भन्ने तहमा पुगेको छ ।
खासमा नेकपा भित्रको यो खेल केवल कुनै एक पदको लागि भएको बार्गेनिङ होइन । मुलत,पार्टी एकतासंगै भएका सहमतिको कार्यान्वयनको लागि गरिएको एक किसिमको दवाव पनि हो । यसैकारण यहा वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री हुने देखि सभामुख छाडने भए मलाइ प्रधानमन्त्री दिनुस भन्ने प्रचण्डको अभिब्यक्ति सम्म आएको छ । यसैले अहिले कार्यकारी अध्यक्ष भएका दाहालले अब ताक्ने भनेको नै प्रधानमन्त्रीको मखमली कुर्सी हो र,अबको राजनीति त्यतै सोझिने देखिन्छ ।